Oniversite Ankatso: fiofanana sy fanodinana vatosoa | NewsMada
Oniversite Ankatso: fiofanana sy fanodinana vatosoa
Notokanana, ny zoma 3 jolay teo, ny laboratoara ho an’ny vatosoa sy ny fanodinana (LGL) ao amin’ny oniversite Antananarivo eny Ankatso. Nitarika ny fotoana ny minisitry ny Harena an-kibon’ny tany, Ravokatra Fidiniavo, niaraka amin’ny filohan’ny filankevi-pitantanana sy ny filohan’ny oniversite Antananarivo ary ny talen’ny ivontoerana ho an’ny harena an-kibon’ny tany, ny jeolojia ary ny solika, ao amin’ny minisitera.
Anisan’ny eo ambany fiahian’ny ivontoerana mikasika ny harena an-kibon’ny tany sy ny fanodinana (IGL) ity laboratoara ity ary miara-miasa amin’ny oniversite Antananarivo. Ankoatra ny fiofanana mikasika ny harena an-kibon’ny tany sy ny fanodinana azy, afaka manao ny asa ho an’ny olon-tsotra na ny mpandraharaha tsy miankina aty ivelany koa izy. Tanjon’ny fanjakana ny hanodinana ny vokatra harena an-kibon’ny tany eto an-toerana, mialoha ny hivarotana sy ny fanondranana any ivelany azy, mba hisondrotra ny vidiny.
Hisy koa any Antsirabe
Nambaran’ny minisitra Ravokatra Fidiniavo fa hisy koa ny fiofanana ho an’ny olona any ifotony ka anisan’ny tafiditra ao anatin’ny Tetibola nasiam-panintsiana LFR 2020 teo ny any Antsirabe. Hivoatra ho matihanina kokoa ny mpanao asa tanana sy ny mpitrandraka any ifotony, amin’ny fanodinana vatosoa sy vato tsotra. Navoitran’ny minisitra koa fa hitohy ny fiaraha-miasan’ny minisitera sy ny IGM ka hanitarana toeram-piofanana sy fanodinana toy ity eny Ankatso ity any amin’ny faritra hafa.
Anisan’ny namatsy ny fitaovana sasany ao anatin’ny laboratoara ny masoivohon’i Thaillande. Vola madiodio avy amin’ny ivontoerana ho an’ny harena an-kibon’ny tany, ny vatosoa ary ny solika kosa ny nananganana ny trano.